घोराहीमा अटो भाडा मनपरी - Pradesh Today घोराहीमा अटो भाडा मनपरी - Pradesh Today
असार २०, २०७५ सपना बोहरा
घोराही, १९ असार ।
तुलसीपुर चोकदेखि हस्पिटल रोडसम्म ५० होइन र ? ७५ रुपैयाँ त महंगो भयो । अलि भाडा मिलाउनु घोराहीको तुलसीपुर चोकमा रिक्सा चालकसँग भाडाको विषयमा यसरी बहस गरिरहेकी थिइन् नारायणपुरकी सुनिता चौधरी । उनी नारायणपुरबाट हायसमा तुलसीपुर चोकमा आएर अस्पतालमा बिरामी भएर भर्ना भएका आफन्तलाई भेट्न जानको लागि अटो रिक्सामा जाने योजना बनाएकी थिइन् । उनलाई अस्पतालमा समयमा नै पुग्नुपर्ने थियो ।
तर अटोमा जानको लागि अटो चालकसँग भाडामा कुरा मिलेको थिएन् । ‘हस्पिटल रोडसम्मको भाडा त ५० रुपैयाँ तो हो नि ? तपाई भाडा बढाएर भन्दै हुनुहुन्छ । उनले फेरी भाडा घटाउन अटोरिक्सा चालकलाई आग्रह गरिन् । अटो रिक्सा चालकले ७५ रुपैयाँ भाडा दिने भए अस्पताल पु¥याउने नत्र पु¥याउन नसक्ने बताए । उनी तुलसीपुर चोकदेखि हस्पिटल रोड ७५ रुपैयाँमा भाडा तिर्नको लागि राजि भएपछि चालकले अटोरिक्सा स्टार्ट गरेर अस्पतालतर्फ सोझिए ।
त्यस्तै घोराहीका प्रकाश शर्माले घोराहीको तुलसीपुर चोकदेखि जिल्ला प्रशासनसम्मको अटो रिक्सामा गएको भाडा १ सय रुपैयाँ तिरे । अन्य दिन ५० रुपैयाँमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुग्ने गरेका शर्माले एक सय रुपैयाँ भाडा बुझाउँदा आक्रोसित भए । ‘अटो रिक्साहरुले पनि मनपरी भाडा लिन थाले छन् । शर्माले भने ‘चोकदेखि त जिल्ला प्रशासनसम्म पचास रुपैयाँ भाडा हो । गोग्लीकी मनिला केसीले पनि अटो रिक्सा चालकहरुले मनपरी रुपमा भाडा असुल्ने गरेको बताइन् ।
‘ट्राफिक चोकमा तरकारी तथा फलफुलको व्यवसाय गर्छु, सामान ओसारपसार गर्ने काम अटोमार्फत हुन्छ । केसीले भनिन् ‘कुनै अटो रिक्सा चालकले भाडा ७५ रुपैयाँ लिन्छन, कुनै त एक सय पचास रुपैयाँसम्म पनि लिएका छन् । अटो रिक्सा चालकहरुले लिने भाडामा एक रुपता नभएको उनी बताउँछिन् ।
केहीदिन यता घोराहीमा अटोरिक्सा चालहरुले मनोमानी रुपमा भाडा लिने गरेको जनगुनासो छ । पछिल्लो समयमा अटोरिक्सामा आवतजावत गर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको र भाडा पनि बढाउँदै गएको यात्रुहरु बताउँछन् । घरायसी सामान होस् वा व्यापारी प्रयोजनको लागि प्रयोगका सामानहरु प्रायः अटोरिक्सामा नै ओसारपसार हुन्छन् भने सामान्य बिरामीदेखि घरदेखि कार्यालय वा अन्य कुनै कामको लागि जान प¥यो भने अटोरिक्साको नै बढी प्रयोग हुन थालिसकेको छ । त्यसकारण पनि अटोरिक्सा चालकहरु बढी भन्दा बढी भाडा असुल्ने होडबाजीमा लागेका छन् । प्रत्येक अटो रिक्सा चालहरुसँग घोराहीको तुलसीपुर चोकलाई केन्द्र मानेर नेपाल ई–रिक्सा चालक संघलले भाडा कायम गरिएको भाडा दरको प्रमाण–पत्र पनि साथमा राखिएका हुन्छन् ।
तर नेपाल ई–रिक्सा चालक संघले कायम गरेको भाडा दरभन्दा तीन गुना बढी भाडा असुल्ने गरेका छन् । संघका अनुसार पाँच वर्षभन्दा माथिलाई पूरै भाडा लाग्ने र एक जना मात्र भएमा ५० रुपैयाँमा भाडा लिने दर रेट निर्धारण गरिएको छ । तर अटोरिक्सा चालकहरुले एकजना यात्रु भएपनि ५० रुपैयाँ, चारजना यात्रु भएपनि गन्तव्यसम्म पु¥याउनको लागि प्रति व्यक्ति ५० रुपैयाँ लिने गरेका छन् । धेरै यात्रु भएमा प्रति व्यक्ति २५ रुपैयाँ लिनु पर्ने संघको नियम छ ।
लालीगुराँस टेम्पो तथा रिक्सा यातायात प्रालिका अध्यक्ष उमाकान्त रिजालले मनोमानी भाडा लिएका अटोरिक्सा चालकहरुलाई सम्बन्धित अटोरिक्सा समितिमा खबर गर्न अनुरोध गरे । ‘सबै अटोहरुमा आ–आफनो समितिको नाम लेखिएको छ, निर्धारित भाडाभन्दा बढी लिएको छ भने खबर गर्दिनुस् । लालीगुराँस टेम्पो तथा रिक्सा यातायात प्रालिका अध्यक्ष रिजालले भने ‘निर्धारण गरिएको भन्दा बढी भाडा लिने अटो चालकलाई कारवाही हुन्छ । प्रत्येक अटो रिक्सा चालकहरु संघ कुन रुटदेखि कुन रुटसम्म कति भाडा लिने भनेर भाडा दर कायम गरिएको पत्र साथमा हुने हुँदा त्यो दर हेरेर भाडा बुझाउन यात्रुहरुलाई सुझाव दिए ।
घोराहीमा सञ्चालन हुने अटो चालहरुसँग बुझ्दा चारवटा छुट्टाछुटै समितिले व्यवसायिक रुपमा अटो सञ्चालन गरिरहेका छन् । अम्बिकेश्वरी रिक्सा यातायात प्रालि, बराहदेव रिक्सा यातायात प्रालि, लालीगँुरास रिक्सा यातायात प्रालि रहेका छन् । एउटा संघको नाममा पनि अटोरिक्सा यातायात सञ्चालनमा छन् । घोराही बजारमा अटो चालकहरुले मनपरी भाडा लिने मात्र होइन् अव्यवस्थित रुपमा पार्किङसमेत गरेका छन् । घोराहीका मुख्य चोकमा अव्यवस्थित पार्किङका कारण सडक साँघुरो हुँदै गएको छ । जसले गर्दा दुर्घटनाको जोखिम समेत बढ््दै गएको छ ।
रामपुरको ताल पोखरामा डुङ्गा